Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: တောင်ကုတ်မြို့၌ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်မှု ကြောင့် လူ၁၀ဦး သေဆုံးခဲ့မှု စတင်စုံစမ်း
“မေးမြန်းတာတွေကို မနက် ၇ နာရီလောက်ကနေ ည ၇ နာရီ၊ ၈ နာရီလောက်အထိလုပ်တယ်”ဟု ယမန်နေ့က သွားရောက်ထွက်ဆိုခဲ့သည့် ဒေသခံတစ်ဦးက ပြော သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က တောင်ကုတ်-သံတွဲလမ်းခွဆုံရှိ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှ ဖုန်း၊ အမ်ပီဖိုးများဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူ များရှိခဲ့ရာ ယင်းဓာတ်ပုံတွင်ပါဝင်သူများနှင့် ရုပ်ဆင်တူသူများကို ရဲမှတစ်ဆင့် ခေါ်ယူကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: တောင်ကုတ်မြို့၌ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်မှု ကြောင့် လူ၁၀ဦး သေဆုံးခဲ့မှု စတင်စုံစမ်း . All Rights Reserved